Alshabaab oo Saaka Weraar Xoogan ku Qaaday Degaanka Bariire ee Gobalka Shabeelaha Hoose – Radio Daljir
Siteenbar 29, 2017 10:52 b 0
Alshabaab ayaa saaka Aroorti xili hore weraar xoogan oo dhowr jiha ah ku qaaday degaanka Bariire ee gobalka shabeelaha Hoose ,waxaana jirra khasaare nafeed iyo mid maalba.
dhinaca kale Weerarkan oo ku bilowday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay, ayaa lagu dhuftay albaabka hore ee xerada Ciidamada Dowladda Soomaaliya ku leeyihiin degaankaasi, waxaana xigay Dagaalyahano Shabaab ka tirsan oo weerar toos ahaa ku qaaday saldhiga.
Al-Shabaab ayaa Saddex jiho ka weeraray laba xero oo Ciidamada Dowladda ay kaga kala sugnaayen Bariga iyo Galbeedka Bariire, Waxaana intii uu socday dagaalka la maqlay qaraxyo waa weyn, Qaraxyadan laba ka mida waxay ka dhasheen baabuur Madooyinka qarxa laga soo buuxiyay.
Degaanka Bariire oo Webiga Shabeelle uu dhexmaro ayaa waxaa dhanka Galbeedka ka deganaa ciidan caddaan ah, halka Ciidamada Dowladda ay iyaguna deganaayeen xero ku taala dhinaca Bariga, Ciidamadii caddaanka, ayaa maalintii Arbacada isaga guuray Bariire, iyagoona xeradii ay ka jooggeen ku wareejiyay Ciidamada Dowladda.
Shabaabka ayaa la wareegay labada xero ee ay weerareen mudo kooban, ka dib markii ay isaga baxeen Ciidamadii Dowladda Soomaaliya, waxayna Ciidamada xeryahaasi ugu taggeen saanad hub ah iyo dhawr ka mida gaadiidka dagaalka.
Majirto Wax masuul dowladeed ah oo ka hadlay Werarkaas alshabaab ay ka geeysten degaankaa mana aha markii ugu horeysay ee ay weraar ka geeystan degaanka